Malala's Valuable Word, မာလာလာရဲ့ အဖိုးတန်စကား ~ Nge Naing
Malala's Valuable Word, မာလာလာရဲ့ အဖိုးတန်စကား
Saturday, October 11, 2014 Nge Naing No comments
(Burmese Translation to the speech of Malala (00:49 - 02:00 Minute)
ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက နိုဘယ်ဆု လက်ခံရသူတွေ ဖြစ်ပြီး တယောက်က
ပါကစ္စတန်က၊ တယောက်က အိန္ဒိယက၊ တယောက်က ဟိန္ဒ္ဒူဘာသာ ယုံကြည်သူ တယောက်
မူစလင်ဘာသာကို ယုံကြည်မှု ပြင်းထန်သူ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ဘာသာနှစ်ခုကြားနှင့်
လူမျိုးနှစ်မျိုးကြား ချစ်ကြည်ရင်းမှုနှင့် အချင်းချင်း အပြန်အလှန်
အထောက်အကူပြုမှုကို ဖေါ်ပြနေပါ တယ်။
I am also really happy this time having this award sharing with the person
from India whose name is Kailash Satyarthi. His great work for child
rights, his great work for against child slavery totally inspire me. I
am very happy that there are so many people working for child rights and
I'm not alone. He totally deserve this award. So I am feeling honor
that I am sharing this ward with him. He receives this ward and we both
are two Nobel award receivers one is from Pakistan and one is from
India, one is believer in Hindu and one is stronger believer in Islam
and it gives the message to people, to the people of love between
Pakistan and India and between different religions. And we both are
sporting each other. It does not matter what the colour of your skin,
what language do you speak, what religion you believe in you should all
consider as human being each other and you should respect each other and
you should all fight for rights, for rights of children, for the rights
of women, for the rights of every human being. (Malala - Nobel Peace
Prize Laureate 2014)
ကျွန်မဟာ ဒီဆုကို အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဖြစ်တဲ့ နဲ့အတူ
ဖက်စပ်ရရှိတဲ့အပေါ်မှာလည်း တကယ်ပဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကြီးမြတ်လှတဲ့
ကလေးအခွင့်အရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှု၊ ကလေးကျွန်ပြုမှုကို
ဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေက ကျွန်မကိုတကယ်ပဲ အားကျဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ကလေးအခွင့်အရေးအတွက် လူတွေအများကြီး တိုက်ပွဲဝင်နေတာကို သိရတာ ကျွန်မ
အတိုင်းထက်လွန် ၀မ်းသာရပါတယ်။ ကလေးအခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာဟာ
ကျွန်မတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက နိုဘယ်ဆု
လက်ခံရသူတွေ ဖြစ်ပြီး တယောက်က ပါကစ္စတန်က၊ တယောက်က အိန္ဒိယက၊ တယောက်က
ဟိန္ဒ္ဒူဘာသာ ယုံကြည်သူ တယောက် မူစလင်ဘာသာကို ယုံကြည်မှု ပြင်းထန်သူ ဖြစ်ပြီး
ဒါဟာ ဘာသာနှစ်ခုကြားနှင့် လူမျိုးနှစ်မျိုးကြား ချစ်ကြည်ရင်းမှုနှင့်
အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အထောက်အကူပြုမှုကို ဖေါ်ပြနေပါ တယ်။ သင့်အသားရောင်ဟာ
ဘာအရောင်ပဲ ဖြစ်နေပါစေ၊ သင်ဘာသာသာစကားကို ပြောသူပင်ဖြစ်ပါစေ၊
သင်ဘာဘာသာကိုပဲ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ ဖြစ်ပါစေ အချင်းချင်း လူသားအဖြစ်ပဲ
လက်ခံစဉ်းစားကာ အပြန်အလှန် လေးစားမှု ရှိရမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့
အခွင့်အရေးတွေ၊ ကလေး အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ လူသားတိုင်းရဲ့
အခွင့်အရေးတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သင့်ပါတယ်။ (Malala - Nobel Peace Prize
မာလာလာရဲ့ Speech ထဲက (၄၉ စက္ကန့် - ၂ မိနှစ်အတွင်း ပြောထားတဲ့စစကား) ကို စာသားရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ ဘာသာပြန်ထားတာပါ။